I-10 YE-THAI AMASIKO OMTSHATO OFANELE UYAZI - UKWAMKELWA KOMSITHO
Eyona Ukwamkelwa Komsitho I-10 ye-Thai Amasiko Omtshato Ofanele Uyazi
I-10 ye-Thai Amasiko Omtshato Ofanele Uyazi
Iprojekti yomtshato icacisa ukubaluleka kwamanzi kunye nomtya omhlophe kwimitshato yaseThai. UMarie Violet Photography
UHana ubhala kwaye ahlele amanqaku eNqaku leLizwe liphela, egxile kugubungela umtshato wokwenyani.
UHana wongamela umxholo wokuzibandakanya kwi-brand Knot yeqabane lophawu lokuba Babuza njani.
Phambi kweKnot kwihlabathi liphela, uHana wayenguMhleli weMidiya yezeNtlalontle eMitshatweni kaMartha Stewart.
Ukuhlaziywa ngoMeyi 11, 2021
Ukuba umenyiwe kumtshato womhlobo waseThai okanye uyabandakanyeka kwaye ujonge ukuhlonipha ilifa lakho laseThai emtshatweni wakho, kukho amasiko ambalwa afakwe kwimitshato yaseThai ekufuneka uyazi. Ngelixa u-Ilaire Irenze, umcwangcisi womtshato kunye nomnini we Umtshato Boutique Phuket , ibonisa ukuba izithethe ezininzi ezibonwe kwimitshato yaseThai zinokuthi 'zahluke kancinane kummandla nommandla,' kukho ezinye izinto eziqhele ukubonwa kwimitshato yaseThailand kwaye ngexesha lomtshato kuhlonitshwa ilifa laseThai.
1. Umhla woMtshato oMnandi
2. Ukwenza iMerit
3. UKhan wenza ukuHamba
5. Umsitho wokuzibandakanya
6. Isiko eliLuhlaza
7. Intsikelelo Yamanzi
8. Ukunikwa kweZipho zaBadala
10. Okulindelwe ziindwendwe
Kubalulekile ukuba eyiyo umhla I-Thai to-be-weds exchange vows ibe yinto encomekayo. U-Ilaire ucacisa ukuba 'umhla nexesha lomtshato waseThai, lifana kakhulu ne Amasiko amaTshayina , ibaluleke ngokukodwa. Esi sibini kufuneka sibonane neentsapho zazo, imonki kunye nabakhwitsi ngeenkwenkwezi ukuze bafumane umhla ogqibeleleyo. '
Ukwenza ukufaneleka ngokufumana intsikelelo yemonki linyathelo elibalulekileyo langaphambi komtshato kwizibini ezitshintshisa umtshato wesintu waseThai. Ukwenza ukufaneleka linyathelo elibaluleke kakhulu kwisithethe seBuddhist ukuqinisekisa ukuba esi sibini sifumana impumelelo kubomi babo bomtshato. Ngelixesha lokuziqhelanisa, esi sibini kufuneka sibonise ukutya iimonki kwaye emva koko iimonki ziyakucula, zithandaze kwaye zisikelele esi sibini ngobomi obonwabileyo nobusempilweni, kwaye sisityebi, uyachaza u-Ilaire. Ngentsasa yosuku lomtshato, esi sibini kufuneka simeme iimonki ezintathu, ezintlanu, ezisixhenxe okanye ezisithoba kwindawo yazo size kuziphakela ukutya. Inani leemonki kufuneka lihlale lingaqhelekanga kwaye xa liphezulu inani liphezulu, intsikelelo iyakuba yiyo. Ngokukodwa, i-9 linani elinethamsanqa kwinkcubeko yaseThai, ke kuyacetyiswa ukuba izibini zimeme iimonki ezilithoba ukuze zisikelele. Iimonki ziya kuthandaza ngesiSanskritic kwaye zisikelele esi sibini ngolonwabo, impilo kunye nobutyebi. Emva kokuba imonki enkulu ingcwalisile umanyano, iimonki zibuyela etempileni kwaye imithendeleko yomtshato ingaqala. '
IITONI, Isitudiyo soMtshato weKata
Emva kokuba isibini sifumene intsikelelo yemonki, kukho ingcali, eyaziwa njenge UKhan Maak , eyenzekayo ukukhaba isahlulo somtshato ngaphambi kokuba umsitho womtshato wenziwe. U-Ilaire ucacisa ukuba 'umyeni uya kukhokela UKhan Maak umngcelele endlwini yomtshakazi; esi sisiqalo seseshoni yothethathethwano xa umyeni kunye nepati yakhe benikezela ngezipho kusapho lomtshakazi. Kule mihla, i UKhan Maak Umngcelele awuseyona nxalenye ibalulekileyo yomtshato wesintu waseThai. Ilahlekile kancinci ngentsingiselo yesivumelwano somtshato phakathi kosapho, ngamanye amaxesha weqa izibini ezisencinci. Ihlala isetyenziswa njengenxalenye yokomfuziselo phakathi kwezibini ezixubeneyo zaseNtshona-Thai, njengoko ivumela ukudityaniswa okuhle kwezi nkcubeko zimbini kunye.
U-Ilaire uqhubeka ngokuqaphela ukuba 'umngcelele uzisa ulonwabo kumnyhadala kwaye ukhatshwa ziimvumi ezidlala imigqomo emide yesintu njengoko iqela lalo lidanisa lisiya endlwini yomtshakazi. Bobabini abadanisi kunye nababethi beengubo banxibe umnyama wempahla yesiko laseThai kwaye ke babonelela ngendlela edlamkileyo nenomtsalane yokukhaba kwimibhiyozo. Umyeni kunye neendwendwe zikhululekile ukuba zingenele njengoko umngcelele ungena kwigumbi lomtshakazi ngaphambi kokuba ujoyine ukuqala umsitho osemthethweni kwisibingelelo okanye kwindawo engcwele. '
UJessi Marri Ukufota
Emva kwe- UKhan Maak kwenziwe umngcelele, kudlalwa imidlalo yasemnyango emnandi. 'Xa usapho lomyeni lufika kwikhaya lomtshakazi indlela ingavalwa ngamasango okanye amasango okomfuziselo,' utsho u-Ilaire. Ngokwembali, 'eminye imidlalo ehlekisayo iyakwenzeka ukuphumelela imbeko yomtshakazi, kubandakanya nokuhlawula imali kwisango ngalinye, le seshoni yemidlalo yocango ibizwa' Sanuk . ''
Nokuba sele wenze kakuhle, uthatha inxaxheba kuyo UKhan Maak Ukugqiba imidlalo yasemnyango, umsitho wothethathethwano kufuneka wenziwe ngaphambi kokuba kuqale umsitho womtshato. U-Ilaire uyacacisa ukuba 'xa umkhwenyana ephumelele ngempumelelo kwimidlalo yasemnyango, isindululo somtshato kunye nomsitho wokuzibandakanya ngokusemthethweni uyenzeka. Umsitho wokuzibandakanya yinxalenye esondele kakhulu kuwo wonke umtshato obandakanya abazali besi sibini kunye nezihlobo ezisondeleyo ezindala kwaye kubandakanya nokutshintshiselana ngeeringi zomtshato.
Nangona ngokwembali ezinye zeziganeko zangaphambi komtshato zinokwenzeka ukuba ziye zenzeka kwiintsuku ezininzi, kuqhelekile ukuba zonke izinto zemitshato yanamhlanje yaseThai yenzeke kwangolo suku lunye. 'Imitshato yase-Thai ngesiqhelo iya kwenziwa kwangolo suku lunye, utshilo u-Ilaire. 'Ukuqala kuthethathethwano ukuya kumsitho wentsikelelo yamanzi. Kwixesha elidlulileyo, oku kungenzeka ukuba kwenzeke kwiintsuku nje ezimbalwa, kodwa kule mihla kuye kwanyanzelwa usuku lonke lombhiyozo. '
'Ukulandela umsitho wothethathethwano siya kuba' Sai Monkhon isithethe, apho esi sibini sihlanganiswe ngumtya ngokufuziselayo, kwaye ke eyona nto ibalulekileyo kwisithethe saseThai, umsitho wentsikelelo yamanzi, ' Intonga , izakuqhubeka ichaza u-Ilaire. 'Ngexesha' Sai Isono , 'umsonto omhlophe uqhagamshelwe [kuwo wonke umntu oza kutshata] ngesigqubuthelo sentloko esenziwe ngentambo esibonisa umanyano lwesibini.'
Emva kwesiko elimhlophe lomsonto, intsikelelo yamanzi linyathelo elilandelayo lomsitho womtshato waseThai. 'Abantu baseThailand bakholelwa ukuba amanzi luphawu olunamandla lwentsikelelo,' ucacisa uIlaire ngokubaluleka kwalo msitho. Ngaphandle kwemitshato, 'uninzi lwezithethe zaseThai zibandakanya imisitho enxulumene namanzi. Umzekelo, ' Ingoma Kran , 'Unyaka oMtsha waseThai, waziwa kwilizwe jikelele njengombhiyozo wamanzi otshisayo (owenzeka ngo-Epreli) apho abantu babongoza imvula ukusikelela iziko. Kuyafana nakwi ' ULoy Krathong , 'Omnye umnyhadala obaluleke kakhulu eThailand, wenzeka kwiinyanga ezintandathu kamva (ngoNovemba) apho abantu babulela uthixokazi wamanzi ngamalungiselelo eentyatyambo kunye namakhandlela.' Ngenxa yexabiso abantu baseThai ababeka emanzini, kuyamangalisa ukuba 'isiko lokugalela amanzi kwimitshato yaseThai ngokuqinisekileyo lelona linentsingiselo,' ucebisa u-Ilaire. 'Xa umtshakazi nomyeni behleli ecaleni komnye nomnye, kwaye bejoyine umsonto omhlophe waseSai Monkhon, iindwendwe zomtshato ziya kuqala ukuhlangana ukuze zibenethuba nesi sibini. Aba babini babamba izandla ngokusondeleyo njengoko iindwendwe zabo ezizukileyo zisebenzisa iqokobhe elikhethekileyo elisikelelweyo, elihlala lithathwa elwandle, ukugalela amanzi kwisibini esimanyeneyo. Kuqhelekile ukuba lo mntu xa egalela amanzi, banqwenelele abantu abatshatileyo okuhle kwaye banike neengcebiso malunga nobomi obuhle kunye. '
UMarie Violet Photography
Inxalenye ebalulekileyo yemitshato yesiqhelo eThailand kukuhlonipha abantu abadala. U-Ilaire ucacisa ukuba 'ngexesha lomtshato wesintu wase-Thailand kubalulekile ukuba uhloniphe abadala ngokwenza isiko kwizipho kubazali bomtshakazi nomyeni kunye nabahlobo babo abadala. Ngokwesiko, abazali bomtshakazi bafumana imiqondiso yentlonipho kuqala, phambi kokuba abazali bomyeni baziswe ngezabo.
Ngelixa ulwamkelo lomtshato wasentshona lubonisa ukudanisa kunye nokutya okuninzi, akusoloko kugxilwe ikakhulu kwimisitho yomtshato yesiThai. 'Itheko lolwamkelo liza kulandela, kodwa kufuneka sithi ukutya neziselo ayisiyonto ibaluleke kangako kumtshato wesiko lesiThai, hayi, akubalulekanga njengokuba kunjalo kwinkcubeko yasentshona, utshilo u-Ilaire. Ukwamkelwa ikakhulu sisihlandlo esihle seendwendwe zokuthatha iifoto ezininzi kunye nabantu abasandul 'ukutshata.
Xa usiya emtshatweni wesiThai okokuqala ngqa, kukho iingcebiso kunye nemigaqo yesithupha ekufuneka iindwendwe zomtshato ziyigcine engqondweni. U-Ilaire ucebisa iindwendwe zomtshato ukuba 'zinganxibi zonke ezimnyama okanye a; ezimhlophe kumtshato waseThai, njengoko leyo iyimibala enxitywa ngabantu baseThai emingcwabeni. Kwakhona sukubuza ukuba malini ikhazi, kuba uhlonipha iintsapho zesi sibini. Kwakhona, nakweyiphi na imisitho yomhla womtshato, vumela abadala ukuba baqhubekeke kuqala. Okokugqibela, ukuba awunguye umBhuda kuphephe ukujoyina umsitho wenkolo neemonki ungakhange ufunde kancinci ngeentsingiselo nemithetho yokuhlonelwa kwale nkolo. '
Ifoto kaKen Tan
zimnandi iingoma zokudanisa zikayise ezili-16
Izipho ezilungileyo zonyaka we-10